Ny Tsunade Best Quotes Naruto Fans dia ho tia! - Hafa
Ny famoriam-bola lehibe indrindra avy amin'ny tsunade avy any Naruto
Tsunade dia iray amin'ireo Sennin 3 ary izy irery no vehivavy. Vehivavy matanjaka ety ambonin'ny tany, mazàna manafina ny fahalemeny amin'ny ivelany ivelany.
Ny fitanisany azy dia maneho ireo toetra amam-panahy sy ny fomba fisainany ireo. Tsy lazaina intsony ny fotoan-dehibe Naruto.
Andao hiditra ao!
Teny Tsunade tsara indrindra:
ohatrinona ny indostrian'ny anime
“Mitomboa… tonga miaraka amin'ny shinobi ny fahafatesana. Indraindray sarotra ny manaiky ny fahafatesana, fa raha tsy miala aminy ianao dia tsy misy ny ho avy. ' - Tsunade
anime mitovy amin'ny vita amin'ny lavaka mangitsokitsoka
“Izaho no Hokage fahadimy… Nanitsakitsaka ny harenan'ireo razambenay… ny nofinofisin'izy ireo… ary ianao no handoa ny vidiny! Amin'ny maha Hokage ahy dia hampiato anao eto sy eto aho izao! ” - Tsunade
“Fa maninona aho no mametraka ny fiainako ho faty? Satria izao… Izaho no Hokage fahadimy amin'ny tanàna miafina amin'ny ravina! ” - Tsunade
“Ny olona toa an'i Jiraiya… sy Sarutobi, ary ny loholona Chiyo avy amin'ny fasika dia nanana zavatra tsy nanananareo roa. Fantatrao ve izany ?? … Finoana! Ny raibeko, ny Hokage Voalohany, dia nino anao ary nanankina anao tamin'ny tanàna. Anjaranao izao no mino ireo ankizy ireo ary manankina izany aminy! ' - Tsunade
tsy maintsy mahita anime amin'ny fotoana rehetra
“Ho faty aho alohan'ny hamelako anao hikasika azy!” - Tsunade
“Iray amin'ireo Sannin Legendary naka Genin orona orona… menatra ny tenako aho.” - Tsunade
“Jiraiya, ianao ve no nampianatra azy ny Rasengan? Moa ve ianao manao toa ny mpampianatra amin'ny fampianarana azy zavatra tsy hainy? Aza manome azy hevitra! Izany no antony itiavan'ny ankizy manonofinofy fa ho lasa Hokage izy indray andro any. ' - Tsunade
“Mihamatanjaka ny olona satria manana zavatra tsy hadinony. Izay no antsoinao hoe fitomboana. ' - Tsunade
Sary asongadina: Source
14+ amin'ny teny Kimimaro tsy hay hadinoina indrindra avy amin'ny Naruto!
27+ Naruto T Shot dia tsy tianao hialana!
dub anime lehibe indrindra hatramin'izay
nofinofy ny fiainana bebop koboy
lisitry ny anime tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra